Apple Archives | Page2of 17 | Pyae Heinn Kyaw's Blog
Apple အနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘ​ယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းနေသလဲ?
Apple, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE iPhone 12 Series ကစပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ အားသွင်းခေါင်းနဲ့နားကြပ်ကို ထည့်သွင်းပေးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ Apple က အတိအလင်းကြေငြာထားပါတယ် .. ဒီလို Charger နဲ့ EarPods ကိုမထည့်သွင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ကာဘွန်တန်ချိန် ၂ သန်းထိလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် .. အဲ့ဒီပမာဏဟာ လမ်းမပေါ်မှာနှစ်စဥ်သွားလာနေတဲ့ ကားအစီးရေ 450,000 ကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ကာဘွန်ပမာဏနဲ့ညီမျှတယ်လို့လဲပြောကြားသွားပါသေးတယ် ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ဒါဟာကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်နေတာမဟုတ်ပဲ စီးပွားရေးလုပ်စားတာလို့သာမြင်ပါတယ် .. ခင်ဗျားတို့ပဲ စဥ်းစားကြည့်ပါ .. Apple က Charger နဲ့ EarPods မထည့်ပေးတော့ဘူးဆိုကတည်းက တခြား Brand တွေဟာ Accessory အရေအတွက်ကို တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တချက်က Apple အနေနဲ့ MagSafe လို Feature မျိုးထပ်မံကြေငြာသွားတော့ MagSafe …
Apple အနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘ​ယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းနေသလဲ? Read More »
Apple, iOS, iPadOS, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE Apple ကနေအသစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ iOS 14 ဟာ User တွေရဲ့ Privacy ပိုင်းကိုအားစိုက်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေလုပ်ထားဆိုတာ သိသာပါတယ် .. အခုဆိုရင် iOS 14 တင်ထားရုံနဲ့သင့်ကို ဘယ် Application တွေက Camera တွေ Mic တွေကနေတဆင့် ထောက်လှမ်းနေလဲဆိုတာကိုပြသပေးသွားမယ့်အပြင် Application တခုချင်းစီကို Photo Library တခုလုံး Access ပေးစရာမလိုပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံပဲရွေးပြီး Access ပေးနိုင်ခြင်း၊ ကြော်ငြာပြသဖို့အတွက် Tracking လုပ်တာကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ Clipboard Access ယူနေတဲ့ Application တွေကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊ Location နေရာအတိအကျမပေးပဲ General Location သာ Access ပေးခြင်း စတဲ့ Feature …
iOS 14 မှာပါဝင်လာတဲ့ သင့်ကို ဘယ် Application တွေက တိတ်တဆိတ်ထောက်လှမ်းနေလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်မည့် Privacy Features များ Read More »
AirPods, Apple, HowTo, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE AirPods Pro တွေမှာ Spatial Audio ရဖို့ဆိုရင် Firmware Version 3A283 ကိုတင်ထားရမှာဖြစ်ပြီး iPhone ဟာလဲ iOS 14 တင်ထားတာဖြစ်ရပါမယ် .. ဒါဆိုရင်တော့ Control Centre မှာ Spatial Audio ကို On/Off လုပ်လို့ရပါပြီ Spatial Audio ဆိုတာကတော့ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ရုပ်ရှင်ရုံမှာရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ အသံတွေက ဘက်ပေါင်းစုံကလာတဲ့ Feeling မျိုးကို AirPods Pro ကနေ ပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ Speaker တွေအများကြီးကိုပတ်ပတ်လည်တပ်ဆင်ထားတာပါ .. AirPods မှာက Speaker 1 လုံးထဲနဲ့ ပတ်ပတ်လည် Sound Effect ရဖို့ Software နဲ့ပြင်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ် …
AirPods Pro Firmware Update မှာအသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Spatial Audio Feature Read More »
Apple, HowTo, iOS, iPadOS, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မနက်ဖြန် (Sept 15) မြန်မာစံတော်ချိန် ည 11:30 မှာ Apple က Even တခုလုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ Product အသစ်တွေကို ကြေငြာသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် .. အဆိုပါ Event မှာ Apple Watch Series6နဲ့ iPad Air အသစ်တို့ကို မိတ်ဆက်နိုင်ချေ 90% လောက်သေချာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ iPhone နဲ့ MacBook အသစ်တွေ ပါဝင်မလားဆိုတာကတော့ အခုထိမသိရသေးပါဘူး ဒီ Event အပြီးမှာ iOS 14 နဲ့ iPadOS 14 တို့ကို Official Release လုပ်မယ့်ရက်ကိုပါ Announce လုပ်သွားနိုင်ချေရှိပါတယ် .. အဲ့တော့ iOS …
iOS 14 မတင်ခင် သိထားရမည့်အချက်များ Read More »
Apple, HowTo, MacBook, macOS / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ macOS မှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ထည့်သွင်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးအတိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့ဆိုရင် သင့်ရဲ့ MacBook မှာ macOS Catalina နဲ့အထက် သွင်းထားဖို့လိုပါတယ် Step 1 – အရင်ဆုံးကိုယ်က ZawGyi သုံးမှာလား, Unicode သုံးမှာလားဆုံးဖြတ်ရပါမယ် .. ပြီးရင် System Preference ထဲကိုဝင်ပါ Step2– Language & Region ထဲဝင်ပါ Step3– Preferred Language ထဲမှာ (+) ကိုနှိပ်ပြီး Burmese (မြန်မာစာ) Language ကို Add လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် မြန်မာစာ …
macOS မှာ မြန်မာ Font နဲ့ မြန်မာ Keyboard ထည့်သွင်းနည်း (Both ZawGyi and Unicode) Read More »